Ampiasaina voajanahary: fitsapana ny ra, isan-karazany mahazatra, ary ny fomba hampihenana ny haavony - Fanabeazana Ara-Pahasalamana | Desambra 2021
News Ny Fizahana Orinasa Zava-Mahadomelina Vs. Namana Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Vaovao Lalao Orinasa, Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Biby Fiompy Fahasalamana Vaovao, Wellness Orinasa, The Checkout Fialam-Boly Orinasa, Vaovao Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina, Vaovao Community, Company
Tena >> Fanabeazana Ara-Pahasalamana >> Creatinine: fitsapana ny ra, isan-karazany mahazatra, ary ny fomba hampihenana ny haavony
Creatinine: fitsapana ny ra, isan-karazany mahazatra, ary ny fomba hampihenana ny haavony
Eo amin'ny kilometatra roa amin'ny fihodinanao atoandro ianao, na mandeha amin'ny seta fahatelo eo amin'ny dabilio, na mandeha bisikileta miakatra amin'ny dia isan'andro. Miaina haingana ianao, ary may ny hozanao. Mitete ny saokanao ny hatsembohana. Ny hafanana mamoaka ny takolakao. Ary rehefa vita ianao dia tsy misy zavatra mahatsapa tsara kokoa noho ny fandroana mafana, rano mangatsiaka iray vera ary seza eo ambony sezalava.
Tahaka ny ankamaroan'ny olona, ​​dia fantatrao tsara ny fomba mahatonga ny vatanao hanao zavatra ara-batana mahatsapa— ny fifohana rivotra, ny hatsembohana ary ny hafanana. Mety hiroborobo amin'izany ianao. Saingy misy be kokoa ny zava-mitranga eto ambany. Rehefa simba ny hozatrao mandritra ny fanatanjahan-tena dia miverina miadana izy ireo ary mihabe ny hozatra, saingy ity dingana ity dia mamoaka ireo vokatra fako ao amin'ny ranao, indrindra ny kôline.
Na dia mety ho zavatra farany eritreretinao aza izany raha eo am-potoana ny kilaometatrao ianao na mahatratra ny iray-max max, ny tahan'ny famoronana ra anao dia mety ho famantarana lehibe amin'ny fahasalamanao sy ny asan'ny voa.
Inona no atao hoe kérinine?
Ny olon-drehetra dia misy fatran'ny kôlaminina serum ao amin'ny lalan-dràny. Creatinine dia vokatra voajanahary amin'ny fampiasana hozatra, vokatry ny fahatapahan'ny simika antsoina hoe creatine. Ny Creatinine mihitsy dia tsy manana fiasa ara-batana manokana - vokatra fako fotsiny io. Mijanona ao anaty rà fotsiny izy mandra-pahatongany any amin'ny voa, izay sivana sy esorina amin'ny alàlan'ny fivalanana.
Noho izany, ahoana ny vatanao mamorona kôlininina? Manomboka amin'ny creatine izy io, izay mifangaro ao amin'ny voa, ny sarakaty ary ny atiny, avy eo entina amin'ny alàlan'ny rà mandriaka ary voatahiry ao amin'ny hozatry ny taolanao. Mandritra ny fiezahana mafy dia manova ny voary ho lasa angovo ny hozatrao, izay manampy amin'ny fihenan'ny hozatra. Taorian'ny nanatanterahany ny tanjony dia lasa kôlininina ny mpamorona ary niditra tao amin'ny lalan-dra hatrany amin'ny lalan'ny voa.
Na dia tsy mahasoa (na manimba) ny vatanao aza ny kôline, dia azo refesina ny habetsaky ny kôlikinina ao amin'ny ranao hanombanana ny fahasalaman'ny voa. Noho io antony io dia matetika ny dokotera no mampiasa fitsapana kreatinina - miaraka amin'ireo fitsapana amin'ny laboratoara hafa, toy ny fitsapana nitroka urea azota (BUN) - hanaraha-maso ny aretin'ny voa maharitra (CKD) na ny tsy fahombiazan'ny voa.
Inona no atao hoe fetin'ny mpamorona?
Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, ny fari-piainan'ny kôlerinina serum (hita ao anaty ra) ho an'ny olona manana voa tsara dia 0,9 hatramin'ny 1,3 mg isaky ny desiliter ho an'ny lehilahy lehibe ary 0,6 ka hatramin'ny 1,1 mg isaky ny desiliter ho an'ny vehivavy lehibe .
Na izany aza, betsaka ny miovaova raha ny haavon'ny kôlininina. Ny mahazatra dia teny somary ifantohana. Ny famotehana ny hozatra dia miteraka kôlininina, noho izany ny hozatry ny hozatrao sy ny haavon'ny asa ataonao dia mety hisy fiantraikany amin'ny habetsahan'ny ranao. Mba handrefesana tsara ny haavon'ny mpamorona ra, ny dokotera dia hanombatombana ireo anton-javatra isan-karazany ireo hametrahana tsipika fototra, hoy i Taylor Graber, MD, anesthesiologist ary mpanorina ny ASAP IV . Ny fanombanana ny haavon'ny Creatinine dia manomboka amin'ny fahazoana tsipika demografika hanombanana izay tokony ho 'haavon'ny normal', hoy ny Dr. Graber. Miankina amin'ny taona, firazanana, lahy sy vavy ary ny haben'ny vatana izany. Raha vantany vao vita ara-dalàna ireo soatoavina ireo, ny fiovana avy amin'ity elanelana ity dia mety hidika fa tsy ara-dalàna ny voa.
Ireo mpanome tolotra ara-pahasalamana dia tia mijery akaiky ny haavon'ny zavaboary noho ny antony maro samihafa. Raha manana na voa ianao ankehitriny, simba ny voa, diabeta, na aretina hafa misy fiatraikany amin'ny voa, na mihinana fanafody mety hisy fiatraikany amin'ny voanao, ny mpitsabonao dia mety hanome baiko famaritana kôrinina tsy tapaka hanaraha-maso ny fiasan'ny voa. Ny fomba fitsapana mahazatra indrindra dia amin'ny alàlan'ny rà sy urina.
Ny kôdinina izay avy amin'ny ranao dia antsoina hoe kôlerinina serum, ary azo refesina amin'ny fanaovana fitiliana ra mahazatra. Rehefa lasa simba ny fiasan'ny voa, dia tsy azo esorina ny kôlinina kely kokoa, izay miteraka kôdinina avo lenta kokoa amin'ny ra, hoy ny fanazavan'i Dr. Graber. Na dia tsy milaza mivantana aminao aza ity fitsapana ity hoe mahomby tokoa ny voa, dia azo arahana rehefa mandeha ny fotoana ny fanovana. Afaka mampiasa an'io ny mpikarakara ny fahasalamana fitsapana ra kôrinina (miaraka amin'ny anton-javatra toy ny taona, firaisana, firazanana, sns.) mba hikajiana ny tahan'ny filtration glomerular (GFR), izay tena ilaina amin'ny famaritana ny tsy fahombiazan'ny voa na ny aretin'ny voa maharitra.
Fitsapana ny urine
Ny fomba mahazatra indrindra hitsapana ny haavon'ny kôlininina dia amin'ny alàlan'ny a Fanangonana urine 24 ora . Fa maninona no 24 ora? Ny fanatanjahan-tena, ny sakafony ary ny hydration dia mety hisy fiantraikany amin'ny kôlininina, ka mety hiovaova ny haavon'ny tontolo andro. Noho izany, ny mpitsabo anao dia mila santionany amin'ny urine maro manombatombana amin'ny fomba mahomby ny fahazoan-tsainao momba ny zavaboary . Araka ny eritreretinao azy, ity fitsapana ity dia mitaky fanangonana ny ranonao rehetra mandritra ny 24 ora, avy eo aterina amin'ny mpitsabo anao. Miorina amin'ny valiny, ny mpitsabo anao dia afaka mamaritra fa tsara ny voanao no manivana ny kôline amin'ny lalan-dra.
Ireo mpikarakara ny fahasalamana dia hanafatra ny fitsapana roa mba hijerena tsara ny fiasan'ny voa amin'ny alàlan'ny fampitahanao ny GFR (eGFR) tombanana ho anao sy ny habetsaky ny mpamorona urinine. Raha miahiahy momba ny aretin'ny voa na ny fahasimban'ny dokotera ianao dia mety hanafatra fitsapana azota azotazy (BUN) koa izy hanamafisana ny fitiliany. Ity fitsapana ity dia refesina amin'ny habetsahan'ny azota urea - karazana fako hafa voasivana ao amin'ny voa ao anaty santionan'ny ra.
Inona no dikan'ny haavon'ny kôlikinina tsy ara-dalàna?
Ka nankany amin'ny dokotera ianao, nanao ny fitsapana, ary ny vokany dia: Manana fetin'ny kôlikinina avo ianao. Ary ahoana? Dingana voalohany - aza mikoropaka. Ny kôlikinina avo lenta dia tsy voatery hidika hoe mihena hatrany ny voanao. Izay rehetra ivelan'ny faritra mahazatra (0,9 ka hatramin'ny 1,3 mg isaky ny desiliter ho an'ny lehilahy lehibe ary 0,6 ka hatramin'ny 1,1 mg isaky ny desiliter ho an'ny vehivavy lehibe) dia mety hahatonga ny mpitsabo iray hanadihady bebe kokoa, saingy tsy manoratra loza matetika.Antony maro no mety hisy fiantraikany amin'ny valin'ny fitsapana anao. Ireto misy vitsivitsy fotsiny:
Fanatanjahantena mitombo: Efa nanao ekipa fanatanjahan-tena ve ianao? Ao amin'ny gym isan'andro? Ity fihanaky ny fihenan'ny hozatra ity dia hampitombo ny famoronana kôlininina.
Fampitomboana ny fanjifana proteinina: Ny hena nandrahoina dia misy kôlininina, koa raha misakafo amin'ny steak sy akoho akoho isan'alina ianao dia afaka mahita ambaratonga avo kokoa.
Fanakanana ny lalan-dra: Raha tsy afaka mivoaka ianao, ny vatanao dia tsy afaka manafoana ny kôlininina, noho izany ny vato voa sy ny fikorontanan'ny urinary hafa dia hamela azy hijanona ao amin'ny lalan-dranao.
Fanafody sasany: Indraindray, ny rongony dia mety ho meloka. Ny trimethoprim antibiotika (mitadiava tapakila trimethoprim | antsipirian'ny trimethoprim) syCimetidine (tadiavo ny tapakila Cimetidine | antsipirian'ny Cimetidine), fery amin'ny vavony sy fivalanam-po, afaka manakana ny tsiambaratelon'ny kôlinina . Indraindray, ny fanafody anti-steroidal anti-inflammation (NSAIDs), toy ny ibuprofen, dia mety ho antony iray ihany koa.
Tosidra ambony: Nasehon'ny fandinihana ihany koa fa ny fiakaran'ny tosidrà, ny tsy fahombiazan'ny fo, ary ny toe-po hafa dia mety miteraka fitomboan'ny haavon'ny kôlinina.
Toy izany koa, ny kreatinina ambany dia tsy mampidi-doza foana. Mety ho vokatry ny habetsaky ny hozatra ambany (na aretina amin'ny hozatra toy ny fihenan'ny hozatra), ny fitondrana vohoka, ny fihinanana proteinina ambany, na ny atin'ny aty sasany.
Afaka miova haingana ve ny haavon'ny kôlinina?
Ny haavon'ny Creatine dia afaka miova haingana, na dia mandritra ny tontolo andro aza, ka izany no manara-maso azy ireo mandritra ny fotoana maharitra. Ny fitsapana ra iray izay mamerina ny kôlineina avo amin'ny ra dia mety ho fluke. Na izany aza, fitsapana maromaro nisesy izay mampiseho haavo ambony dia mety hanondro aretin'ny voa maharitra. Ny fiakaran'ny haavon'ny kôlinina tampoka dia mety ho marika fampitandremana amin'ny fahasimban'ny voa mahery vaika na amin'ny toe-javatra hafa, miankina amin'ny soritr'aretina.
Inona no fifandraisana misy eo amin'ny homamiadana sy ny haavon'ny sela?
Ny haavon'ny kôlikinina tsy ara-dalàna dia mety hanondro homamiadan'ny voa na prostaty koa. Na izany aza, ny kôlikinina avo na ambany dia tsy voatery hidika hoe voan'ny homamiadana ianao.
Ahoana ny fampihenana ny haavon'ny kôlinina?
Ny fiheveran'ny mpitsabo anao ny haavon'ny kôlininina tsy ara-dalàna dia miankina tanteraka amin'ny antony fototra. Ny fanovana ny fomba fiainana sy ny sakafo dia mety ho fitsaboana tsotra sy mahomby amin'ny tranga madinidinika. Saingy ny aretin'ny voa maharitra, ny fahasimban'ny voa, na ny tsy fahombiazan'ny voa dia mitaky fomba matanjaka kokoa. Ny fanafody hifehezana ny soritr'aretina, ny dialyse, na amin'ny tranga faran'izay mafy, dia mety ilaina ny famindrana voa. Ireto misy fomba vitsivitsy mety hampihena ny haavon'ny kreatinina:
Ahena ny fihinanana proteinina
Ahenao ny hetsika mavitrika (fa aza tapahina mihitsy ny fanaovana fanatanjahan-tena!)
Mahazoa fibre betsaka kokoa amin'ny sakafonao (indrindra amin'ny voankazo sy legioma)
Inona no hialana
Famenon-kofidina Creatine na hafa fanampin-tsakafo
Sakafo voahodina avo sodium
Fanjifana alikaola tafahoatra
Famenony chitosan dia naneho fiatraikany tsara amin'ny fahasalaman'ny voa
Salvia dia fanafody nentim-paharazana sinoa ho an'ny aretin'ny voa
Dite maitso na dite raokandro - atody mikitroka, chamomile, ginseng ary fakany dandelion manokana
Tsy misy fanafody mampihena manokana ny haben'ny kôlikinina ao amin'ny ranao. Raha misy dokotera manapa-kevitra ny aretin'ny voa dia miteraka tsy fitovian'ny kôlikinina tsy ara-dalàna, dia mety hanome fanafody hampihenana ny soritr'aretina izy. Ny fanafody prescription dia misy:
Mpanakana ny angôniôma-manova anzima (ACE) toy ny Lotensin (benazepril) sy Capoten ( captopril ) mankany mampihena ny tosi-dra .
Angiotensin II Receptor Blockers (ARB) toy nyEdarbi(azilsartan) sy Teveten (eprosartan) koa mitsabo ny tosidra ambony ary afaka mampihena ny fatran'ny proteinina ao amin'ny urine.
Erythropoiesis-stimulate agents (ESAs) manampy amin'ny fampitomboana ny isan'ireo sela mena.
Fatorana phosphate na potasioma mba hanampiana amin'ny famongorana fosfat sy potasioma fanampiny izay tsy azon'ny voa voasivana.
Mifandray : Antsipirian'ny Lotensin | Antsipirian'ny C laptopril
Andramo ny karatra fihenam-bidy SingleCare
Amin'ny farany, ny torohevitra ara-pitsaboana tsara indrindra amin'ny fanatsarana ny fiasan'ny voa dia ny fiainana fomba fiaina salama tsy tapaka. Dr. Graber dia nilaza fa: mampihena ny sakafo mahasalama misy fangaro voaaroina, fampitomboana ny fihinanana voankazo sy legioma, fanatanjahan-tena tsy tapaka (150 minitra fanatanjahan-tena mahery setra na 75 minitra fanatanjahan-tena mahery vaika isan-kerinandro), mitazona rano foana ary mitazona ny lanjan'ny vatana ao anaty ny salama ara-pahasalamana (index an'ny mason'ny vatana hatramin'ny 20 ka hatramin'ny 25) dia zavatra tokony hifantohana rehefa mandeha ny fotoana mba hahazoana antoka fa omenao ny vatana ireo fitaovana ilainy mba hahombiazany.
Ny tokony ho fantatrao momba ny fihinanana fanafody mandritra ny fitondrana vohoka
inona no tokony ho haavon'ny siramamy amin'ny fifadian-kanina anao?
manao drafitra b pilina aorian'ny 72 ora
inona no fanafody mety hiteraka fitsapana zava-mahadomelina diso
inona no mety hiteraka fiheverana diso ho an'ny benzos
fomba hampihenana ny tosidranao voajanahary
inona no fanafody tsara indrindra raha sery ny loha